So “Nyansa a Efi Soro” Reyɛ Adwuma W’asetra Mu? | Bɛn Yehowa
TI 8 Tumi a Wɔde Siesie Ade—Yehowa ‘Reyɛ Ade Nyinaa Foforo’
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Baoule Bengali Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Niuean Norwegian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
So “Nyansa a Efi Soro” Reyɛ Adwuma W’asetra Mu?
1-3. (a) Ɔkwan bɛn so na Salomo daa nyansa soronko adi wɔ sɛnea odii onii a na ɔyɛ abofra bi maame ho asɛm no ho dwuma no mu? (b) Dɛn na Yehowa ahyɛ yɛn bɔ sɛ ɔde bɛma yɛn, na nsɛmmisa bɛn na ɛsɔre?
NÁ ƐYƐ asɛnnennen—mmea baanu a wɔreko abofra biako ho. Ná mmea no te fie biako mu, na wɔn mu biara awo ɔbabarima a nna kakraa bi pɛ na ɛda wɔn awo no ntam. Ná mmofra no biako awu, na afei mmea no mu biara kyerɛe sɛ ɔne abofra a ɔte ase no maame. * Ná adansefo biara nni asɛm a asi no ho. Ɛda adi sɛ na wɔadi kan adi asɛm no wɔ asɛnnibea kumaa mu, nanso anyɛ yiye. Awiei koraa no, wɔde asɛm no kɔɔ Salomo, Israel hene no, anim. So na obetumi ahu nokware a ɛwɔ asɛm no mu no?
2 Bere a Salomo tiee mmea no akyinnyesɛm no kakra no, ɔkae sɛ wɔmmrɛ no nkrante. Afei, te sɛ nea wate asɛm no ase no, ɔhyɛe sɛ wɔmpae abofra no mu abien na wɔmfa fã mma mmea no mu biara. Ntɛm ara na ɛna no ankasa srɛɛ ɔhene no sɛ ɔmfa abofra no—ne ba a ɔsom bo no—mma ɔbea biako no. Nanso, ɔbea biako no kɔɔ so kae sɛ wɔmpae abofra no mu abien. Afei Salomo huu nokware no. Ná ɔwɔ ayamhyehye a ɛna wɔ ma ne yafumma no ho nimdeɛ, na ɔde saa nimdeɛ no dii dwuma de siesiee asɛm no. Hwɛ abotɔyam a ɛbɛyɛ sɛ ɛna no nyae bere a Salomo de ne ba no maa no na ɔkae sɛ: “Ɔne ne nã” no.—1 Ahene 3:16-27.
3 Ɛyɛ nyansa soronko, ɛnte saa? Bere a nkurɔfo no tee sɛnea Salomo adi asɛm no, wɔn ho dwiriw wɔn, “efisɛ wohui sɛ Onyankopɔn nyansa wɔ ne mu.” Yiw, na Salomo nyansa no yɛ Onyankopɔn akyɛde. Na Yehowa ama no “nyansa ne nhumu koma.” (1 Ahene 3:12, 28) Na yɛn nso ɛ? So yɛn nso yebetumi anya Onyankopɔn nyansa? Yiw, efisɛ wɔde honhom kaa Salomo ma ɔkyerɛwee sɛ: ‘Yehowa na ɔma nyansa.’ (Mmebusɛm 2:6) Yehowa hyɛ bɔ sɛ ɔbɛma wɔn a wofi komam hwehwɛ nyansa—tumi a wotumi de nimdeɛ, ntease, ne nhumu di dwuma pa—no bi. Ɔkwan bɛn so na yebetumi anya nyansa a efi soro? Na ɔkwan bɛn so na yebetumi de adi dwuma wɔ yɛn asetra mu?
“Nya Nyansa”—Ɔkwan Bɛn So?
4-7. Nneɛma anan bɛn na ɛsɛ sɛ yenya na ama yɛanya nyansa?
4 So ɛsɛ sɛ yɛn adwene mu dɔ pii anaasɛ ɛsɛ sɛ yesua nhoma kɔ akyiri ansa na yɛanya Onyankopɔn nyansa? Dabi. Yehowa wɔ ɔpɛ sɛ ɔbɛma yɛn nyansa ɛmfa ho baabi a yefi ne yɛn nhomanim. (1 Korintofo 1:26-29) Nanso, ɛsɛ sɛ yefi ɔpɛ mu yɛ ho adwuma, efisɛ Bible hyɛ yɛn nkuran sɛ ‘yennya nyansa.’ (Mmebusɛm 4:7) Yɛbɛyɛ dɛn atumi ayɛ saa?
5 Nea edi kan, ɛsɛ sɛ yesuro Onyankopɔn. Mmebusɛm 9:10 ka sɛ: “Nyansa mfiase ne [Yehowa, NW] suro [“ade a edi kan a wɔnam so hu nyansa,” The New English Bible].” Onyankopɔn suro ne nokware nyansa nnyinaso. Dɛn ntia? Kae sɛ nea ɛka nyansa ho ne tumi a wotumi de nimdeɛ di dwuma yiye. Ɛnyɛ ehu ne ahopopo a yɛde bɛkɔ Onyankopɔn anim na ɛkyerɛ sɛ yesuro no, na mmom sɛ yɛde nidi, obu, ne ahotoso bɛkotow no. Osuro a ɛte saa fata na ɛhyɛ nkuran yiye. Ɛka yɛn ma yɛbɔ yɛn bra ma ɛne Onyankopɔn apɛde ne n’akwan hyia. Nyansakwan foforo biara nni hɔ a yebetumi afa so, efisɛ Yehowa gyinapɛn ahorow ma wɔn a wodi so no nya mfaso kɛse bere nyinaa.
6 Nea ɛto so abien, ɛsɛ sɛ yedwo na yɛda ahobrɛase adi. Sɛ obi nnwo na onni ahobrɛase a ontumi nnya Onyankopɔn nyansa. (Mmebusɛm 11:2) Dɛn nti na ɛte saa? Sɛ yedwo na yɛwɔ ahobrɛase a, yebefi yɛn pɛ mu agye atom ankasa sɛ ɛnyɛ biribiara na yenim, sɛ ɛnyɛ bere nyinaa na yɛn nsusuwii teɛ, na mmom ɛsɛ sɛ yehu Yehowa adwene wɔ nneɛma ho. Yehowa “siw ahantanfo kwan,” nanso n’ani gye ho sɛ ɔbɛma wɔn a wodwo no nyansa.—Yakobo 4:6.
Sɛ yebenya Onyankopɔn nyansa a, ɛsɛ sɛ yɛbɔre hwehwɛ
7 Ade a ɛto so abiɛsa a ɛho hia ne Onyankopɔn Asɛm a wɔakyerɛw no a yebesua. Wɔada Yehowa nyansa no adi wɔ N’asɛm mu. Sɛ yebenya saa nyansa no a, ɛsɛ sɛ yɛbɔre hwehwɛ. (Mmebusɛm 2:1-5) Ahwehwɛde a ɛto so anan ne mpaebɔ. Sɛ yefi komam hwehwɛ Onyankopɔn nyansa a, ɔde bɛma yɛn ma aboro so. (Yakobo 1:5) Obebua mpae a yɛbɔ hwehwɛ ne honhom no. Na ne honhom betumi ama yɛanya ademude wɔ N’asɛm a ebetumi aboa yɛn ma yɛadi ɔhaw ahorow ho dwuma, akwati asiane, na yɛasisi gyinae ahorow a nyansa wom no mu.—Luka 11:13.
8. Sɛ yɛanya Onyankopɔn nyansa ampa a, ɔkwan bɛn so na ɛbɛda adi?
8 Sɛnea yehui wɔ Ti 17 no, Yehowa nyansa yɛ nea yetumi de di dwuma. Enti, sɛ yɛanya Onyankopɔn nyansa ampa a, ɛbɛda adi wɔ yɛn nneyɛe mu. Osuani Yakobo kaa aba a Onyankopɔn nyansa sow ho asɛm bere a ɔkyerɛwee sɛ: “Nyansa a efi soro no de, nea edi kan ne sɛ ɛho tew, ɛwɔ asomdwoe, ɛwɔ odwo [“ɛwɔ ntease,” NW], ɛwɔ asoɔmmerɛw; mmɔborohunu ne aba pa ayɛ no ma, ennye akyinnye [ɛnyɛ nyiyim, NW], ɛnyɛ nyaatwom.” (Yakobo 3:17) Bere a yesusuw Onyankopɔn nyansa afã yi mu biara ho no, yebetumi abisa yɛn ho sɛ, ‘So nyansa a efi soro no reyɛ adwuma wɔ m’asetra mu?’
“Ɛho Tew, Ɛwɔ Asomdwoe”
9. Sɛ́ obi ho tew no kyerɛ dɛn, na dɛn nti na ɛfata sɛ ahotew yɛ nyansa su a edi kan?
9 “Nea edi kan ne sɛ ɛho tew.” Sɛ́ obi ho bɛtew no kyerɛ sɛ ɔbɛyɛ kronn a efĩ nni ne ho, ɛnyɛ honam ani kɛkɛ na mmom ne mu nso. Bible de nyansa bata koma ho, nanso ɔsoro nyansa ntumi nhyɛn koma a nsusuwii bɔne, akɔnnɔ bɔne, ne adwemmɔne ayɛ no ma mu. (Mmebusɛm 2:10; Mateo 15:19, 20) Nanso, sɛ yɛn koma mu tew—kyerɛ sɛ, sɛnea nnipa a yɛnyɛ pɛ betumi ayɛ—a, ‘yebefi bɔne ho na yɛayɛ papa.’ (Dwom 37:27; Mmebusɛm 3:7) So ɛnyɛ nea ɛfata sɛ ahotew yɛ nyansa su a edi kan? Sɛnea ɛte no, sɛ yɛn ho ntew wɔ abrabɔ ne honhom fam a, ɔkwan bɛn so na yebetumi ada nyansa a efi soro no su afoforo no adi?
10, 11. (a) Dɛn nti na ɛho hia sɛ yɛyɛ nnipa a yɛpɛ asomdwoe? (b) Sɛ wote nka sɛ woafom wo yɔnko somfo bi a, ɔkwan bɛn so na wubetumi ada no adi sɛ woyɛ obi a wopɛ nkabom? (Hwɛ ase hɔ asɛm no nso.)
10 “Ɛwɔ Asomdwoe.” Ɔsoro nyansa ka yɛn ma yedi asomdwoe a ɛyɛ Onyankopɔn honhom aba no akyi. (Galatifo 5:22) Yɛbɔ mmɔden sɛ yɛrensɛe “asomdwoe hama” a ɛka Yehowa nkurɔfo bom no. (Efesofo 4:3) Afei sɛ asɛm ba yɛn asomdwoe ho a, yɛyɛ nea yebetumi biara sɛ yebesiesie. Dɛn nti na eyi ho hia? Bible ka sɛ: ‘Monkɔ so ntra asomdwoe mu, na ɔdɔ ne asomdwoe Nyankopɔn bedi mo akyi.’ (2 Korintofo 13:11) Enti bere tenten a yɛkɔ so tra asomdwoe mu no, asomdwoe Nyankopɔn bedi yɛn akyi. Sɛnea yɛne yɛn mfɛfo asomfo di nsɛm no ka yɛne Yehowa ntam abusuabɔ tẽẽ. Ɔkwan bɛn so na yebetumi ada yɛn ho adi sɛ yɛyɛ nkurɔfo a yɛpɛ asomdwoe? Susuw nhwɛso bi ho hwɛ.
11 Sɛ wuhu sɛ woafom wo yɔnko somfo bi a, dɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ? Yesu kae sɛ: “Enti sɛ wode w’ayɛyɛde ba afɔremuka ho, na ɛhɔ wokae sɛ wo nua wɔ asɛm bi tia wo a, gyaw w’ayɛyɛde no afɔremuka no anim hɔ, na kɔ na wo ne wo nua no nkɔbom kan ansa na woaba abɛma w’ayɛyɛde no.” (Mateo 5:23, 24) Wubetumi de saa afotu no adi dwuma denam wo nua no nkyɛn a wobɛkɔ so. Botae bɛn na wode bɛkɔ? Sɛ wo ne no ‘rekɔbom.’ * Nea ɛbɛyɛ na woatumi ayɛ saa no, ebia ebehia sɛ wugye ɛyaw a wadi no tom, na wunnye kyim. Sɛ wokɔ ne nkyɛn a botae no ne sɛ worekɔhwehwɛ asomdwoe, na wokɔ so kura su a ɛte saa mu a, ɛda adi sɛ wubetumi ayi ntawntawdi biara afi hɔ, apa no kyɛw sɛnea ɛsɛ, na ɔno nso de akyɛ wo. Sɛ wufi wo pɛ mu kɔ sɛ worekɔhwehwɛ asomdwoe a, woda no adi sɛ Onyankopɔn nyansa na ɛkyerɛ wo kwan.
‘Ɛwɔ Ntease, Ɛwɔ Asoɔmmerɛw’
12, 13. (a) Asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase ‘ntease’ wɔ Yakobo 3:17 no kyerɛ dɛn? (b) Ɔkwan bɛn so na yebetumi ada no adi sɛ yɛwɔ ntease?
12 ‘Ɛwɔ ntease.’ Sɛ́ obi bɛyɛ obi a ɔwɔ ntease no kyerɛ dɛn? Sɛnea nhomanimfo kyerɛ no, mfitiase Hela asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase “ntease” (NW) wɔ Yakobo 3:17 no asekyerɛ yɛ den. Nsɛm asekyerɛfo de nsɛmfua te sɛ “odwo,” “boasetɔ,” ne “tema” na adi dwuma. New World Translation ase hɔ asɛm bi akyerɛ sɛ ne ntease ankasa ne “gyae a wogyae nsɛm mu.” Ɔkwan bɛn so na yebetumi ada no adi sɛ yɛde nyansa a efi soro no fã yi reyɛ adwuma?
13 Filipifo 4:5 ka sɛ: “Momma nnipa nyinaa nhu mo dwo [ntease, NW]!” Nkyerɛase foforo kenkan sɛ: “Monyɛ nnipa a wonim sɛ mowɔ ntease.” (The New Testament in Modern English, a J. B. Phillips yɛe) Hyɛ no nsow sɛ ɛnyɛ asɛm no ne sɛnea yehu yɛn ho; ɛyɛ sɛnea afoforo hu yɛn, sɛnea wonim yɛn. Obi a ɔwɔ ntease nhwehwɛ sɛ afoforo bedi mmara so katee anaasɛ ɔnhwehwɛ sɛ wɔbɛyɛ nneɛma sɛnea ɔno pɛ bere nyinaa. Mmom no, ɔwɔ ɔpɛ sɛ obetie afoforo, na bere a ɛfata no, obegyae nsɛm mu ayɛ nea afoforo pɛ. Odwo nso, ɔnyɛ basabasa anaa katee wɔ ɔne afoforo nsɛnnii mu. Bere a eyi ho hia ma Kristofo nyinaa no, ɛho hia titiriw ma wɔn a wɔresom sɛ mpanyimfo no. Odwo twetwe nnipa, ɛma mpanyimfo yɛ nkurɔfo a wotumi bɛn wɔn. (1 Tesalonikafo 2:7, 8) Ɛyɛ papa sɛ yɛn nyinaa bebisa yɛn ho sɛ, ‘So wonim me sɛ obi a mewɔ tema, migyae nsɛm mu, na midwo?’
14. Ɔkwan bɛn so na yebetumi ada no adi sɛ ‘yɛn aso yɛ mmerɛw’?
14 “Ɛwɔ asoɔmmerɛw.” Hela asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase “ɛwɔ asoɔmmerɛw” no nni baabi foforo biara wɔ Kristofo Hela Kyerɛwnsɛm no mu. Sɛnea nhomanimfo bi kyerɛ no, saa asɛmfua yi, “wɔtaa de di dwuma wɔ asraafo mu.” Ekura adwene a ɛne “obi asɛm a ɛnyɛ den” ne “obi ho ase a ɔbrɛ ma afoforo.” Ɛnyɛ den sɛ obi a nyansa a efi soro kyerɛ no kwan no bɛbrɛ ne ho ase ahyɛ nea Kyerɛwnsɛm no ka ase. Wonnim no sɛ obi a osi gyinae na ɔmma asɛm foforo biara nsesa n’adwene. Mmom no, sɛ wɔde Kyerɛwnsɛm mu adanse a emu da hɔ kyerɛ no sɛ wadi mfomso wɔ ne gyinaesi anaa ne nsɛnkae mu a, ɔyɛ nsakrae ntɛm ara. So saa na afoforo nim wo?
“Mmɔborohunu ne Aba Pa Ayɛ no Ma”
15. Dɛn ne mmɔborohunu, na dɛn nti na ɛfata sɛ wɔbɔ “mmɔborohunu” ne “aba pa” din bere koro mu wɔ Yakobo 3:17?
15 “Mmɔborohunu ne aba pa ayɛ no ma.” * Mmɔborohunu yɛ nyansa a efi soro no fã a ɛho hia efisɛ wɔkyerɛ sɛ ‘mmɔborohunu ayɛ’ nyansa a ɛte saa ‘ma.’ Hyɛ no nsow sɛ wɔbɔ “mmɔborohunu” ne “aba pa” din bere koro mu. Eyi fata, efisɛ wɔ Bible mu no, wɔtaa kyerɛ mmɔborohunu ase sɛ dwen a wɔkɔ so dwen afoforo ho, ayamhyehye a ɛma wɔda ayamye pii adi. Nhoma bi kyerɛ mmɔborohunu ase sɛ “awerɛhow a obi di wɔ obi tebea a enye ho na ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ ho biribi.” Enti, Onyankopɔn nyansa nyɛ nea enni tema, ɛnyɛ atirimɔden, anaa nhomanim kɛkɛ. Mmom no, ɛwɔ ɔdɔ, koma pa, ne tema. Ɔkwan bɛn so na yebetumi ada no adi sɛ mmɔborohunu ayɛ yɛn ma?
16, 17. (a) Ɔdɔ a yɛwɔ ma Onyankopɔn akyi no, dɛn na ɛkanyan yɛn ma yenya asɛnka adwuma no mu kyɛfa, na dɛn ntia? (b) Akwan bɛn so na yebetumi ada no adi sɛ mmɔborohunu ayɛ yɛn ma?
16 Akyinnye biara nni ho sɛ ɔkwan a ɛho hia ne sɛ yɛbɛka Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa no akyerɛ afoforo. Dɛn na ɛkanyan yɛn ma yɛyɛ saa adwuma yi? Ne titiriw no, ɛyɛ ɔdɔ a yɛwɔ ma Onyankopɔn. Na mmɔborohunu anaa ayamhyehye a yɛwɔ ma afoforo nso kanyan yɛn. (Mateo 22:37-39) Nnipa pii ‘abrɛ, na wɔsam hɔ sɛ nguan a wonni hwɛfo’ nnɛ. (Mateo 9:36) Nyamesom mu nguanhwɛfo atorofo abu wɔn ani agu wɔn so, na wɔama wɔayɛ anifuraefo honhom fam. Ne saa nti, wonnim akwankyerɛ a nyansa wom a ɛwɔ Onyankopɔn Asɛm mu anaa nhyira ahorow a Ahenni no de bɛba asase so nnansa yi ara no. Enti sɛ yesusuw nnipa a yɛne wɔn te no honhom fam ahiade ho a, ayamhyehye a efi koma pa mu no ka yɛn ma yɛyɛ nea yebetumi nyinaa de ka Yehowa atirimpɔw a ɔdɔ wom no ho asɛm kyerɛ wɔn.
Sɛ yɛda mmɔborohunu, anaa ayamhyehye adi kyerɛ afoforo a, yɛda “nyansa a efi soro” adi
17 Akwan foforo bɛn so na yebetumi ada no adi sɛ mmɔborohunu ayɛ yɛn ma? Kae Yesu mfatoho a ɛfa Samariani bi a ohuu ɔkwantufo a ɔda kwankyɛn a na wɔawia ne nneɛma aboro no ho no. Samariani no yam hyehyee no, na “ohuu no mmɔbɔ” kyekyeree n’akuru no hwɛɛ no. (Luka 10:29-37) So eyi nkyerɛ sɛ mmoa ankasa a yɛbɛyɛ ama wɔn a ade ahia wɔn no ka mmɔborohunu ho? Bible ka kyerɛ yɛn sɛ “yɛnyɛ nnipa nyinaa yiye, ne titiriw no wɔn a wɔyɛ gyidi fifo.” (Galatifo 6:10) Susuw nneɛma a yebetumi ayɛ no bi ho hwɛ. Ebetumi aba sɛ yɔnko gyidini bi a ne mfe akɔ anim hia kar de akɔ Kristofo nhyiam aba. Ebia na okunafo bi a ɔwɔ asafo no mu hia mmoa wɔ ne fie a obesiesie ho. (Yakobo 1:27) Ebia obi a n’abam abu behia “asɛmpa” bi a ɛbɛkyekye ne werɛ. (Mmebusɛm 12:25) Sɛ yɛda mmɔborohunu adi wɔ akwan a ɛte saa so a, yɛda no adi sɛ nyansa a efi soro no reyɛ adwuma wɔ yɛn mu.
‘Ɛnyɛ Nyiyim, Ɛnyɛ Nyaatwom’
18. Sɛ nyansa a efi soro na ɛkyerɛ yɛn kwan a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden yi fi yɛn koma mu, na dɛn ntia?
18 ‘Ɛnyɛ nyiyim.’ Onyankopɔn nyansa tumi di nnipa mu nyiyim ne ɔman a obi fi mu a ɔde hoahoa ne ho so. Sɛ nyansa a ɛte saa na ɛkyerɛ yɛn kwan a, yɛbɛbɔ mmɔden ayi adwene biara a ɛbɛma yɛahwɛ nnipa anim no afi yɛn koma mu. (Yakobo 2:9) Yɛrennyina afoforo nhomanim, wɔn sika, anaa asɛyɛde a wɔwɔ wɔ asafo mu so ne wɔn nni; saa ara na yɛremmu yɛn mfɛfo asomfo biara animtiaa ɛmfa ho sɛ ebia wɔyɛ ahiafo no. Sɛ Yehowa ayi ne dɔ adi akyerɛ saafo no a, ɛsɛ sɛ yebu wɔn sɛ wɔfata sɛ yeyi yɛn dɔ adi kyerɛ wɔn.
19, 20. (a) Hela asɛmfua a egyina hɔ ma “nyaatwom” ho abakɔsɛm ne dɛn? (b) Ɔkwan bɛn so na yɛda “onuadɔ a nkontompo nni mu” adi, na dɛn nti na eyi ho hia?
19 “Ɛnyɛ Nyaatwom.” Hela asɛmfua a egyina hɔ ma “nyaatwom” no betumi akyerɛ “ogofo bi a onya agoru bi mu kyɛfa.” Tete no, na Helafo ne Romafo agofo hyɛ nkataanim kɛse bi bere a wɔredi agoru no. Enti, wɔde Hela asɛmfua a egyina hɔ ma “nyaatwom” no bedii dwuma wɔ obiara a ɔde sɛnea ɔte ankasa sie, anaa obi a ɔnka nokware ho. Ɛnyɛ sɛnea yɛne yɛn mfɛfo asomfo di nsɛm nko na ɛsɛ sɛ Onyankopɔn nyansa no fã yi nya so nkɛntɛnso na mmom sɛnea yɛte nka wɔ wɔn ho nso.
20 Ɔsomafo Petro kae sɛ ɛsɛ sɛ ‘osetie a yɛyɛ ma nokware no’ ma yɛda “onuadɔ a nkontompo nni mu” adi. (1 Petro 1:22) Yiw, ɛnsɛ sɛ ɔdɔ a yɛda no adi kyerɛ yɛn nuanom no yɛ nnipa ani so de. Yɛnhyɛ nkataanim anaa yɛmfa yɛn ho nhyɛ dwumadi bi mu mfa nnaadaa afoforo. Ɛsɛ sɛ yɛda nokware dɔ, nea efi koma pa mu adi. Sɛ yɛyɛ saa a, yɛn mfɛfo gyidifo benya yɛn mu ahotoso, efisɛ wobehu sɛ yɛte sɛnea yɛte no ankasa. Nokwaredi a ɛte saa de abusuabɔ a nokwaredi wom ba Kristofo mu, na ɛboa ma asafo no mufo nya wɔn ho wɔn ho mu ahotoso.
‘Fa Nyansahu Sie’
21, 22. (a) Ɔkwan bɛn so na Salomo antumi amfa nyansa ansie? (b) Ɔkwan bɛn so na yebetumi de nyansa asie, na ɔkwan bɛn so na yebetumi anya saa a yɛbɛyɛ no so mfaso?
21 Onyankopɔn nyansa yɛ akyɛde a efi Yehowa hɔ, ade a ɛsɛ sɛ yɛde sie. Salomo kae sɛ: “Me ba, . . . fa nyansahu ne adwempa sie.” (Mmebusɛm 3:21) Awerɛhosɛm ne sɛ, Salomo ankasa antumi anyɛ saa. Bere tenten a okuraa koma a etie mu no, ɔyɛɛ onyansafo. Nanso, awiei koraa no, ne yerenom ananafo pii no dan ne koma fii Yehowa nokware som ho. (1 Ahene 11:1-8) Nea ɛtoo Salomo no ma ɛda adi sɛ sɛ yɛamfa nimdeɛ anni dwuma ɔkwan a ɛfata so a, ɛbɛyɛ nea mfaso biara nni so.
22 Ɔkwan bɛn so na yebetumi de nyansahu asie? Ɛnyɛ kenkan nko na yɛbɛkenkan Bible no ne Bible ho nhoma ahorow a “akoa nokwafo ne ɔbadwemma” no yɛ ma yɛn daa no, na mmom ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden de nea yesua no di dwuma nso. (Mateo 24:45) Yɛwɔ biribiara a enti ɛsɛ sɛ yɛde Onyankopɔn nyansa di dwuma. Ɛbɛma yɛanya asetra pa mprempren. Ɛma yetumi ‘so nokware nkwa’—Onyankopɔn wiase foforo no mu asetra—‘no mu pintinn.’ (1 Timoteo 6:19) Na nea ɛho hia sen biara no, nyansa a efi soro a yebenya no bɛma yɛabɛn nyansa nyinaa wura, Yehowa Nyankopɔn.
^ nky. 1 Sɛnea 1 Ahene 3:16 kyerɛ no, na mmea baanu no yɛ nguaman. Insight on the Scriptures ka sɛ: “Ebetumi aba sɛ na saa mmea yi yɛ nguaman a ɛnyɛ sɛ na wosi tuutuu, na mmom na wɔyɛ mmea a wɔbɔɔ aguaman, ebia na wɔyɛ Yudafo mmea anaasɛ, ebetumi aba sɛ na wɔyɛ ananafo mmea.”—Yehowa Adansefo na wotintimii.
^ nky. 11 Hela asɛm a wɔkyerɛɛ ase “nkɔbom” no fi adeyɛ asɛm a ɛkyerɛ “‘kɔpopa, kɔsesa’ mu ma enti ɛkyerɛ ‘kɔpata mo ntam.’” Enti wo botae ne sɛ, sɛ ɛbɛyɛ yiye a, wobɛsesa, wubeyi nitan afi nea woafom no no koma mu.—Romafo 12:18.
^ nky. 15 Nkyerɛase foforo de nsɛm yi, “ayamhyehye ne nnwuma pa ayɛ no ma” na edi dwuma.—A Translation in the Language of the People, a Charles B. Williams yɛe.
Deuteronomium 4:4-6 Ɔkwan bɛn so na yɛda yɛn ho adi sɛ yenim nyansa?
Dwom 119:97-105 Sɛ yɛde nsi sua Onyankopɔn Asɛm na yɛde di dwuma a, ɔkwan bɛn so na yebenya so mfaso?
Mmebusɛm 4:10-13, 20-27 Dɛn nti na yehia Yehowa nyansa?
Yakobo 3:1-16 Ɔkwan bɛn so na wɔn a wɔyɛ ahwɛfo wɔ asafo no mu no da no adi sɛ wonim nyansa na wɔwɔ ntease?
Bible som bo ma wo? Wusua 2 Timoteo 3:16 ɛbɛma woanya Bible a Yehowa de akyɛ yɛn no mu gyidi